News Collection: आर्यनका सात सफाइ
आर्यनका सात सफाइ
सन्तोष रिमाल, काठमाडौं, साउन ५- अभिनयमा अवसर पाउन थानकोट - रत्नपार्क खण्डमा धेरै चक्कर लगाएपछि आर्यन सिग्देलको भाग्य खुल्यो। लात्ती र मुक्काले व्यापारिक सफलता निर्धारण गर्ने फिल्मकर्मीको विश्वास उनको प्रवेशले टुट्यो। नेपाली फिल्मलाई 'एक्सन'बाट 'लभस्टोरी'तर्फ मोड्ने श्रेय मिल्यो उनलाई।
युवा दर्शक रिझाउन आर्यनलाई समय लागेन। 'किस्मत', 'मेरो एउटा साथी छ', 'फस्ट लभ', 'कसले चोर्‍यो मेरो मन' आदि फिल्मबाट उनी सफल भए। तर, यिनको लोकप्रियता र आलोचनाको पारो एकैसाथ माथि चढ्यो। 'आई एम सरी'को सुटिङमा व्यस्त सिग्देलले आफूमाथिका 'आरोप'को नागरिकसँग खण्डन गरे।
'रेखा फिल्मस्'सँगको टकराव
मलाई यो कम्पनीका निर्माता छवि ओझाले किन लिएनन् भन्नेमा स्पष्ट कारण थिएन। एउटा कुरा सत्य हो कि म व्यस्त थिएँ। व्यस्त हुनु, उनीहरुले भन्ने बित्तिकै समय दिन नसक्नु मेरो दोष होइन। तर, बजारमा चाहिँ धेरै पैसा मागेकाले निकालेको भन्ने हल्ला चलेछ। मैले त्यो कम्पनीलाई सस्तोमै काम गरिदिएको छु।
कसैले ब्रेक दियो भन्दैमा आजीवन त्यो कम्पनीको फिल्म निःशुल्क खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। काम राम्रो भएर कम्पनीले धेरै कमाएपछि कलाकारलाई पनि उचित रकम दिनुपर्छ। क्षमता नभएकालाई कसैले पनि फिल्म खेलाउँदैन। र कसैलाई 'स्टार' बनाएको गफ दिनु बेकार हो। म जस्तो हिरो बन्ने सपना पालेकाहरु सडकमा हजारौँ भेटिन्छ। जसलाई पनि 'चम्काउन' सक्ने आत्मविश्वास भएकाले मेरो कुरा काट्नुको सट्टा नयाँ प्रतिभा खोज्नतिर लाग्नु नै राम्रो।
निर्देशकलाई स्क्रिप्ट सिकाउने!
यो मेरो पहिलो र अन्तिम घटना हो। निर्देशक मदन घिमिरेसँग फिल्मको स्क्रिप्ट हेर्न माग्दा फिल्मबाटै हटाइयो मलाई। 'दोस्ती' फिल्मका निर्देशकलाई कलाकारले स्क्रिप्ट माग्दा अपमान गरेको जस्तो लागेछ। म भने उनको चरित्रमा आफूलाई अझै डुबाउन सकुँ भनेर स्क्रिप्ट पढ्न चाहन्थेँ। त्यो घटनाले राम्रै काम गर्‍यो। त्यसपछि मलाई फिल्म खेलाउन खोज्नेले स्क्रिप्ट सहित अफर गर्ने गरेका छन्।
पारिश्रमिकले आकास छोयो
मैले फिल्म हिट हुने बित्तिकै हौसिएर पारिश्रमिक बढाएको होइन। एउटा फिल्मबाट ६ लाख थापेको हालसालै मात्र हो। वर्षमा चारभन्दा बढी फिल्म खेल्न भ्याउँदिन। त्यसैले यति नभए 'सभाइभ' हुनै कठिन हुन्छ। कतिपय फिल्म सम्बन्धको आधारमा थोरैमा पनि खेलेको छु। मैले खेलेको फिल्मले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ। खेलाउनेलाई पनि यति पैसा दिन आपत्ति छैन। तैपनि यसलाई किन इस्यु बनाइँदैछ, बुझेको छैन। सस्तोमा काम गरेर आफूलाई 'मेन्टन' गर्न सकेन भने 'हिरो भएर यस्तो!' भन्दै उडाउने पनि तिनै हुन्छन्।
हिरोइन सिफारिसमा अग्रसर
फिल्ममा कलाकार छान्ने अधिकार निर्देशकलाई हुन्छ। म आफ्नो भूमिकाबारे चनाखो पक्कै हुन्छु। तर, सहकर्मीको बारेमा तनाव लिन्न। मेरो त्यति ठूलो हैसियत पनि बनेको छैन। फिल्मको कथा अनुसार कसैले को ठिक होला भन्यो भने आफ्नो राय दिएको हुँला। तर, सिफारिसको खेलमा उत्रिएको छैन। तर यस्तो हल्ला गरेर मेरो वजन बढाइदिने मित्रहरुलाई धन्यवाद।
'आर्यन त ५ बजे नै रक्सी खान सुटिङ छोडेर जान्छ' भनेको मेरै कानमा परेको छ। आज (मंगलबार) रातिको १० बजेको छ। मौसमले पनि दिउँसैदेखि 'च्यालेन्ज' गरेको हो। तर मेरो मुख गनाएको छ त? म मदिरा लम्पट भएको भए निर्माताले दोर्‍याउँथे? फुर्सदमा, कुनै उत्सवमा पिएँ हुँला। तर, मलाई जँड्याहाकै रूपमा चित्रण गरेको देख्दा अचम्म लाग्यो।
पर्दाकै जस्तो रोमान्स
साथी छन्। रमाइलो गर्न मन लाग्छ। तर, कामलाई हानि हुने केही गरेको छैन। सुटिङमा सधैं मोबाइल अफ गर्छु। काम नसकिई सेट छोडेर जान्न। कहिलेकाहिँ ग्यादरिङमा रमाउँछु। यदाकदा पब जान्छु। मेरो जीवन पर्दामा देखेको जस्तो रंगीन छैन। सबै रङ भरेर गरिएका चर्चा हुन्। आफ्नो काममा सफलता नपाएका कारण 'फ्रस्टेट' भएका फिल्मकर्मीहरु मेरो गलत चित्रणमा लागि परेका छन्। म उहाँहरुलाई 'अरूको चियोचर्चा छोडर काममा लाग्नुस् सफल हुनुहुनेछ' भन्न चाहन्छु।
सम्झौता गर्दै फिल्म छोड्दै
म चित्त नबुझेको काम जबरजस्ती गर्न सक्दिन। पैसाको लोभमा संख्या बढाउने चाहना पनि छैन। मैले सम्झौता गरिसकेको धेरै फिल्म पैसा फिर्ता गरेर छोडेको छु। 'दोस्ती', 'हो यही माया हो', 'पर्खिराख है' जस्ता फिल्ममा कठिनाई आएपछि मैले चुपचाप एडभान्स फिर्ता गरेर काम छाडेँ। सहज वातावरण नभई काम गर्दा बनाउने र खेल्ने दुवैलाई घाटा हुन्छ।